Akụkọ - Ajụjụ na mbubata na mbupụ nke Chemicals dị ize ndụ na Nnyocha ngwugwu
Ajụjụ na mbubata na mbupụ kemịkalụ dị ize ndụ na nyocha nkwakọ ngwaahịa
Ejikwa ọkwa nchịkwa nchịkwa kọstọm nke 129 nke 2020 "Nkwupụta maka okwu gbasara mbubata na mbupụ kemịkalụ dị ize ndụ na nyocha na nleba anya ngwugwu". Kọstọm ahụ enwetala ndụmọdụ azụmahịa n'aka ọtụtụ ụlọ ọrụ na -ebubata na mbupụ, Karịa họrọ ajụjụ nnọchite anya 9 n'etiti ha. Maka ajụjụ a kapịrị ọnụ, anyị ga -akwadebe azịza nye ajụjụ ndị a na -ajụkarị gbasara nyocha na nlekọta kemịkal dị ize ndụ na mbubata na nkwakọ ngwaahịa ha maka ntụnyere ụlọ ọrụ dị mkpa.
1.Ọ ga -enyocha kemịkal dị ize ndụ nke ebubata site na nhazi nhazi?
A chemicals Chemicals dị egwu gụnyere nsogbu nchekwa. Yabụ, n'ụkpụrụ, ekwesịrị inyocha kemịkalụ dị ize ndụ nke ụzọ azụmaahịa dị iche iche na -ebubata, yana kemịkal dị ize ndụ nke mbubata azụmaahịa na -ebubata dịkwa mkpa ka enyocha ya dịka iwu nyocha kemịkal dị mbubata na mbubata si dị.
2.Mpempe nchekwa nchekwa nke mmiri agwakọtara na -egosi na ọkụ ọkụ adịghị "na ọdabara". Enwere ike ikpe ya na ọ bụghị nke kemịkal edepụtara na listi kemịkal dị ize ndụ (mbipụta 2015)?
A ： A na -ebu ụzọ chọọ ngwakọta ya na ihe ndị mejupụtara ya na -ekwu maka ihe dị ọcha iji hụ ma enwere ntinye ngwakọta XXX (dị ka 124 "propyne na ngwakọta propadiene [nke siri ike]", 276 "polybrominated diphenyl ether ngwakọta", wdg. .), Ọ bụrụ na enwere ihe dabara, a na -ekpebi na ọ bụ nke ihe ahụ;
Ọ bụrụ na enweghị ihe ọ bụla dabara, ọ dabere na ma ọkụ ọkụ ọkụ erughị ma ọ bụ hara ka 60 ℃, a na -ekpebi na nkwekọrịta ahụ bụ nke edemede 2828 nke "Ndepụta Ndepụta Ihe Ọjọọ (2015 Edition)"
Mkpebi izugbe nke na-anaghị emezu ọnọdụ ndị a kpọtụrụ aha n'elu bụ na ọ bụghị nke kemịkal edepụtara na "Ndepụta Ngwaahịa Chemicals (mbipụta 2015)".
4.Ọ dị mkpa maka mbupụ kemịkalụ ịchọ ụlọ ọrụ iji nye ọkwa na akụkọ njirimara nke njirimara dị ize ndụ?
A ： Dabere na “Nkwupụta nke Ọchịchị Nchịkwa Ọha na Ọha gbasara Nnyocha na Nlekọta nke Bubata na Mbupụ Chemicals Dị Iche Iche na Nkwakọ ngwaahịa ha” (Nkwupụta nke 129 na 2020), nhazi ọkwa na njirimara njirimara nke njirimara dị ize ndụ bụ ihe dị mkpa maka nkwupụta nke kemịkal dị ize ndụ maka mbupụ, dị ka ikpebi ngwa ahịa ụlọ ọrụ kwesịrị inye kemịkal ndị edepụtara na '' katalọgụ kemịkal dị ize ndụ (mbipụta 2015) ''.
5.E nwere naanị leta "UN" na ngwugwu. Ọ na -emezu ihe achọrọ na -enweghị okirikiri?
A ：A na -eji akara nkwakọ ngwaahịa UN iji gosi na akpa nkwakọ ngwaahịa ahụ na -akwado ihe UN chọrọ "Ntụnye maka mbupu ngwongwo dị ize ndụ, ụkpụrụ ụkpụrụ". Akara nkwakọ ngwaahịa a na -emekarị bụ obere mkpụrụedemede "u" na "n" ahaziri elu na ala na okirikiri, mana maka ịkwakọba ọla, enwere ike iji mkpụrụedemede ukwu "UN" dochie ya ozugbo. N'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na njem okporo ụzọ, enwere ike iji akara "RID" na "ADR" kama.
6.Ọ dị mkpa ịnye ọkwa na njirimara njirimara nke njirimara dị ize ndụ maka kemịkal dị ize ndụ ebubata?
A ： Omenala anaghị anakọta ọkwa na njirimara njirimara nke njirimara dị ize ndụ maka kemịkal dị ize ndụ
7.Ọ nwere ike ịdị mfe ịdebanye aha na obere nchịkọta kemịkal dị ize ndụ?
A ： Dabere na "Nhazi maka nkwadebe akara nchekwa kemịkalụ" (GB 15258-2009), maka obere nchịkọta kemịkalụ erughị 100mL ma ọ bụ nha, maka ịdị mma nke ịdebanye aha, enwere ike ime ka ihe dị na akara nchekwa dị mfe, gụnyere njirimara kemịkalụ, eserese eserese na okwu akara, nkwupụta ihe egwu, ekwentị ndụmọdụ mberede, aha onye na -ebubata ya na akara ekwentị ịkpọtụrụ, yana ozi nwere ike zigara n'asụsụ ozugbo.
8. Ụlọ ọrụ azụmaahịa ngwongwo dị ize ndụ ọ kwesịrị itinye akwụkwọ na kọstọm maka ịtụle iji ngwugwu ngwongwo dị ize ndụ?
A ： Dika "Iwu Nnyocha Ngwaahịa Mbubata na Mbupụ nke ndị mmadụ Republic of China" na ụkpụrụ mmejuputa ya, ụlọ ọrụ na -emepụta ngwa ahịa dị ize ndụ ga -etinyerịrị ụlọ ọrụ na -ahụ maka inyocha ngwongwo maka ịtụle iji ihe nkwakọ ngwaahịa. Ntụle maka iji ngwugwu ngwongwo dị ize ndụ ka ụlọ ọrụ mmepụta ngwa ahịa dị ize ndụ ga -ahụ maka omenala obodo.
9.Gịnị ka nlele nke kemịkal dị ize ndụ na mbubata dị?
A ： Dị ka "Iwu maka njikwa nchekwa kemịkalụ dị ize ndụ" (Iwu nke 591 nke Kansụl Steeti) yana "ọkwa ọkwa nchịkwa niile nke kọstọm n'ihe gbasara okwu nyocha na nlekọta mbubata na mbubata kemịkalụ dị ize ndụ na Nkwakọ ngwaahịa ha "(Nkwupụta nke 129 nke 2020), kọstọm dị ugbu a na -eme nyocha banyere mbubata na mbubata kemịkal dị ize ndụ nke edepụtara na" Ndepụta Ngwakọta Chemicals dị ize ndụ (mbipụta 2015) ".
Post oge: 28-07-21
2-Methyl-4-Nitrobenzoic Acid, N, N-Diethyl-3-Methylbenzamide, Potassium sulfate, 2-Methyl-3-Nitrobenzoic Acid, O-Toluoyl chloride, 2-Methylbenzoic Acid,